Latest Myanmar News - Page 122 of 136 - News & Media
ကျောက်ကပ် ဆီးကျောက်တည်လျှင် ဆီးကျောက် ဆိုသည် မှာ ဆီးအတွင်း၌ ပါသော ပစ္စည်းများ မှ ကျောက်ကပ် အတွင်း မာခဲခဲ အနည် များကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်စဉ် အား ဆီးကျောက် တည်ခြင်းဖြစ်စဉ် ဟုခေါ်သည်။ ဆီးကျောက်များ သည် သေးသေးလေး မှ လက်မလောက်ထိ ကြီးတတ်ပါ၏ ။ ကျောက်ကပ် မှ ဆီးအိမ် ဆီသို့ ဆီးသယ်ပေးသောပြွန် (ဆီးပြွန်) များတွင် ပြည့်နေသည့် ဆီးကျောက် အကြီးကြီးများကို S tag h o r n (စတက်ဟွန်း)ကျောက် ဟုခေါ်သည်။ K idney S t … Read more
ကလေးလူနာအားလုံး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရောဂါပိုးကင်းစင်သူ ၃၁ ဦးထိရှိလာ
COVID -19 ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးလူနာ ငါးဦးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်တယ်လို့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲ က ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။ ကလေးလူနာငါးဦးမှာ သုံးဦးဟာ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် Negative တွေ့ရပြီး ကျန်ကလေးနှစ်ဦးသာ Negative ဖြစ်ဖို့ကျန်သေးတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် ငါးဦးစလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ ဆိုးရွားပြင်းထန်တာမရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိနေတယ်လို့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းအထိ အတည်ပြုလူနာ ၁၅၁ ဦးရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ ကလေးလူငယ်ဟာ ငါးဦးပါဝင်တာပါ။ ကလေးလူငယ်တွေရဲ့အသက်အရွယ်ကတော့ ငါးနှစ်အောက်ကတစ်ဦးနဲ့ ငါးနှစ်ကနေ ဆယ်နှစ်အတွင်းက လေးဦးဖြစ်ပါတယ်။ အငယ်ဆုံးကလေးလူနာကတော့ တစ်နှစ်ခြောက်လဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့လေးတွေဟာစောင့်ကြည့်လူနာတွေမဟုတ်ဘဲ အတည်ပြုလူနာတွေရဲ့ မိသားစုဝင်ဖြစ်ကာ မိသားစုတွင်းကူးစက်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့်ထူးခြားတာက သူတို့မှာ ရောဂါလက္ခဏာမရှိဘူးလိုိ့ ဒေါက်တာခင်ခင်ြ်ကီးရဲ့ရေးသားချက်အရသိရပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ ငါးဦးစလုံး Negatvie နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပြသမှာကိုမျှော်လင့်ရတယ်လို့ … Read more
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများကို စားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး အစိုးရပေးမည်
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများသို့ အခြေခံစားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး ထောက်ပံ့မည် မန္တလေး၊ ဧပြီ ၃၀ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများထံသို့ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် စီမံချက် ရေးဆွဲလျှက်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်က ပြောကြားသည်။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား ခွဲခြားမှုအရ စားသုံးနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကို သိရှိနိုင်ရန် အသက် ၁၂ နှစ်အောက်၊ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်၊ အသက် ၄၁ နှစ်နှင့်အထက်ဟူ၍ ခွဲခြားကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်ဟု ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။ ” ခြောက်မျိုးထောက်ပံ့မယ့် အစီိအစဉ်ပါ။ စီစဉ်ထားဆဲပါ ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ၀င်ငွေနည်းပါးသည့် လက်လုပ်လက်စားများကို အစိုးရက အခြေခံစားသောက်ကုန် … Read more
1.5.2020 ၁၅ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်
၁၅ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ Editလုပ်ပြီးတင်ပေးသွားပါ့မယ် ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြပါစေ သိန်း၁၅၀၀၀ စ၄၄၁၇၉၈ သိန်း၁၀၀၀၀ ည ၅၅၈၀၀၄ သိန်း၅၀၀၀ ဌ၆၃၂၀၄၄ သိန်း၂၀၀၀ ကဃ၅၅၃၂၂၄ သိန်း၂၀၀၀ ဆ၆၂၉၀၉၅ သိန်း၁၀၀၀ ည၂၃၁၁၄၅ သိန်း၁၀၀၀ ဝ-၉၈၄၀၂၀ သိန်း၅၀၀. ဟ၁၁၈၅၅၆ သိန်း၅၀၀. ည၆၆၃၇၆၇ သိန်း၅၀၀. ဆ၄၇၇၆၈၆ သိန်း၅၀၀. ဠ၅၅၄၂၇၅ သိနိး၅၀၀. ည၅၃၂၆၂၀ သိန်း၅၀၀. ကင၂၆၇၅၄၆ သိန်း၅၀၀. မ၅၀၄၁၄၆ သိန်း၅၀၀. က၇၄၁၁၆၃ သိန်း၅၀၀. ကဂ၆၅၅၄၁၉ သိန်း၅၀၀. ဋ၆၂၃၀၉၀ သိန်း၂၀၀. ဗ၂၅၄၀၇၅ သိန်း၂၀၀. ကဂ၄၂၉၉၀၂ သိန်း၂၀၀. င၇၅၁၇၄၁ သိန်း၂၀၀. ဃ၆၁၈၈၀၉ သိန်း၂၀၀. ဋ၉၀၈၉၀၅ သိန်း၂၀၀. ဏ၈၇၆၇၅၅ သိန်း၂၀၀. ခ၅၂၃၇၂၃ သိန်း၂၀၀. … Read more
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ်
မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှအိမ်ထောင်ရေး အဟောများ အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ် တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ၇ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အဟောကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြွင်း ၁ (ကျား) အကြွင်း ၁ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများသည်။ များသာအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ ကျတတ်ကြပါတယ်။ မိမိဘက်က အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သည်းခံ၍ ပေါင်းသင်းပေမယ့် အိမ်ထောက်ဘက်က မိမိအပေါ်ကို ကြပ်ကြပ်မကောင်းလျှင်တော့ နောက်အိမ်ထောင် ၂ ဆက် ၃ ဆက်ထပ်ပြုဖို့ အတွက် ဝန်မလေ့ကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြွင်း … Read more